Aqalka Sare oo ka digay faragelin lagu sameeyo Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed – Radio
November 5, 2018	63	Like
Kulan uu isugu yimid Guddiga Joogtada Aqalka Sare ayuu ka soo saaray doorashada afar qodob, waxaana uu Guddiga shaaca ka qaaday in dadka Gobolada ay xaq u leeyihiin inay si xor ah oo xalaal u soo doortaan cidda hoggaamineysa.
Sidoo kale Guddiga ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay faragelin lagu sameeyo doorashada, hase ahaatee cidna ma aanu carabaabin Guddiga.
“Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare wuxuu welwel ka muujinayaa, islamarkaana ka digayaa in lagu sameeyo faro-gelin dhammaan dooshooyinka Dowlad Goboleedyada, oo ay ugu soo horreyso doorashada Koonfur Galbeed” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeed uu soo saaray Golaha Aqalka Sare.
Sidoo kale war saxaafadeedka Guddiga ayaa lagu yiri “Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare waxa uu adkeynayaa in Shacabka Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ay xaq u leeyihiin in ay u doortaan madaxdooda si xor ah oo caddalad ah”. Deganaanta, hufnaanta, midnimada iyo xasiloonida Koofur Galbeed ayuu Goluhu sheegay iney muhiim tahay in ay shacabka Reer Koofur Galbeed ilaaliyaan.
Golaha ayaa, si gaar ah ugu faahfaahiyey Warsaxaafadeedkiisa muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay in ay ugu dhacdo si degan, oo xor iyo xalaalba ah, Doorashada Madaxweynanimo ee Koofur Galbeed. Gudiga ayaa yiri “Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare waxa uu ugu baaqayaa musharrixiinta madaxtinimo ee Dowlad Goboleedka Koonfur in ay ilaaliyaan, una hoggaansamaan Dastuurka Federaalka, Dastuurka Dowlad Goboleedka iyo Shuruucda kale ee Dalka, ayna raacaan tilmaamaha Guddiga Dooroshooyinka Dowlad Goboleedka”.
Doorashada Koonfurgalbeed iyo iscasilaada wasiir Laftagareen
Cabdicasiis Xasan Laftagareen oo ahaa wasiirkii Tamarta iyo Biyaha Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa duhurnimadii maanta ...